भागरथी हत्याकाण्डले बल्झाइदिएको निर्मलाको घाउ
जनतापाटी आइतबार, माघ २५, २०७७ मा प्रकाशित
गत बुधबार वैतडीमा भागरथी भट्टको बलत्कार पछि हत्या भएको घटनाले फेरि ‘निर्मलाको घाउ’ बल्झाइदिएको छ । करिब डेढ वर्ष अगाडि कन्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलत्कार पछि हत्या भएको थियो । त्यो घटनाका दोषिहरु अझै पक्राउ परेका छैनन् । निर्मलाको हत्यारा पक्राउ गर्नको लागि भन्दै झण्डै एक दर्जन समिति र आयोगहरु बनाइए, दर्जनौं मानिसहरु पक्राउ गरियो, डिएनए टेष्ट गरियो । देशव्यापीरुपमै दवाव सृजना गरियो । तर, हत्यारा पक्राउ परेनन् ।
हत्यारा ‘पहुंचवाला’ नभएको भए पक्राउ पर्नबाट जोगिने थिए ? यसको जवाफ धेरै मानिसहरुसंग छैन । किनकी नेपाल जस्तो देशमा सत्तामा पहुंच भएकाहरु मात्र त्यसरी अपराध गरेपछि कारवाहीमा पर्नबाट बच्ने गरेका छन् । पंचायती व्यवस्था उत्कर्षमा रहेको बेला २०३८ मा पोखरामा भएको नमिता-सुनिता हत्याकाण्ड जस्तै गरि निर्मला हत्याकाण्डका अपराधिहरु पनि कारवाही पर्नबाट जोगिदैं आएका छन् । नमिता सुनिता हत्याकाण्डमा दरबारियाहरु मुछिएका थिए भने निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्याकाण्डमा पनि विभिन्न पहुंचवालाहरुका आफन्तहरुको नाम मुछिदैं आएको छ । तर, प्रहरी प्रशासनले झण्डै डेढ वर्षसम्म पनि अपराधी पक्राउ गर्न नसक्दा निर्मला प्रकरण पनि नमिता–सुनिता हत्याकाण्ड जस्तै रहस्यको गर्भमा लुक्ने त होइन ? अपराधिहरु कारबाहीमा पर्नबाट बच्ने त होइनन् ? भन्ने आशंका जन्माएको छ । यद्धपी प्रहरी–प्रशासन भने अझै पनि दोषि पक्राउ गर्ने दावि गर्न छोडेको छैन ।
निर्मला हत्याकाण्डको ‘घाउ’ सेलाउन नपाउंदै सुदूर पश्चिम प्रदेशमै अहिले फेरि भागिरथी भट्टको बलत्कार पछि हत्या भएको छ । नमिता–सुनिता र निर्मला पन्त काण्ड जस्तै भएन र दोषि पक्राउ परे भने भागिरथी हत्याकाण्डको वास्तविकता बाहिर आउला । तर, उनको हत्यासंग निर्मला हत्याकाण्डको साइनो छ कि छैन ? अहिलेको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यो, हो । किनकी यदि निर्मलाका अपराधी पक्राउ परेर दण्डित भएको भए अपराधिहरुको मनोबल खस्किने थियो । अपराध गरेपछि बच्न सकिदैन भन्ने भावनाको कारण अपराधकर्म गर्नबाट हच्किने अवस्था सृजना हुने थियो ।
तर, निर्मलाका हत्याराहरु पक्राउ नपरेकोले अपराधीको मनोबल उच्च भएको हुनसक्ने कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । वास्तविक कुरा अपराध अनुसन्धानमा काम गर्ने विज्ञ र अधिकारीहरुले बताउलान् तर, निर्मलाका हत्यारा पक्राउ नपरेकै असरस्वरुप समाजमा अपराधिहरुको मनोबल बढेको कुरालाई संभवतः कसैले पनि अस्विकार गर्न सक्दैन । निर्मलाका जस्तै गरी भागरथीका अपराधीहरु पनि दण्डित हुनबाट बचे भए पनि त्यसले अरु चेलिबेटीको ज्यान जोखिममा पार्न निश्चित छ ।
त्यसैले सरकार र प्रहरी प्रशासनले कुनै कसर नराखी भागरथीको मात्र होइन, निर्मलाका पनि हत्याराहरु तत्काल पक्राउ गरि हदैसम्मको कारवाही गर्न पर्छ । त्यसको लागि सरोकारवाला सबै पक्ष संवेदनशिल हुनु जरुरी छ । अन्यथा बलत्कार र हत्या जस्तो गंभिर अपराधका अपराधीहरु पनि कारवाही पर्नबाट बच्दै जाने हो भने त्यसले सिंगो नेपाली समाजको अस्तित्व नै जोखिममा पार्ने छ भन्नेकुरालाई सबै पक्षले अति नै गंभिरता पूर्वक लिनु जरुरी छ ।